Onweghị ihe na - emechu m ihu dịka mgbe m na - emepe ozi email m na - atụ anya na ngwa mkpanaka m enweghị ike ịgụ ya. Ma ihe oyiyi a bụ akara ngosi echekwara echedo nke na-agaghị aza na ngosipụta ahụ, ma ọ bụ ederede dị oke obosara nke na m ga-agagharị na azụ iji gụọ ya. Ma ọ bụrụ na ọ dị oke egwu, anaghị m echere ịlaghachi na desktọọpụ m ịgụ ya. M na-ehichapụ ya.
Ọ bụghị naanị m - ma ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-agụ ihe karịrị ọkara nke ozi ịntanetị ha na ntanetị pere mpe ugbu a. Imewe nzaghachi email dị oke egwu ka email gị pịa-site na ọnụego.
Ebe ọ bụ na anyị mejuputara ozi ịntanetị na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọrụ ozi email ọ bụla, anyị na-agakarị ndị otu ahụ wee nye aka. Enweela m eziokwu n'eziokwu. Ọ dị oke njọ - ha na-akwụ ụgwọ maka ikpo okwu iji zipu ozi-e na ọ nweghị onye na-agụ. Na-agbanwe agbanwe gị email template dị mfe iji zie ezi. Chegodi ije ije na ngwa nbipute na oru gi ma tufuo okara akwukwo… nke ahu bu ihe ị n’eme mgbe ozi ị na-azaghị.
Omume kachasị mma apụtawo n'ọma ahịa a. Nzaghachi na-emeghachi omume adịghị mfe - mana ọ gaghị ekwe omume, kwa. Anyị enweela ndị mọnk na Email Monks na-enyere anyị aka ma ha na-agbaso ndepụta nyocha a egosipụtara iji bulie email gị iji hụ na ọ na-anabata ekwentị nlele na mbadamba.
Jiri onyonyo onyogho nke opekata mpe nke 480px ka ha ghara ihie mgbe emesịrị na mobile
Emela ihe onyonyo, jiri nyocha CSS